वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ कसले जित्यो ? – MeroKhabarSathi
वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ…
वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ कसले जित्यो ?
शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा कुल ४३ वडाध्यक्षहरु चुनावी मैदानमा थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशको चुनावी नतिजा रातारात आइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले १६ प्रतिशत मात्र मत थसेको रोल्पाको थबाङबाट वडाध्यक्षको चुनावी नतिजा आउन थालेको हो ।
भरतपुर-१६ मा हमाल बिजयी
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना